Qiimeynta Ciyaartoyda Kulankii Ay Man United Guusha Soo Laabashada Aheyd Ka Gaartay Juventus - Kumaa Ahaa Xiddiga Garoonka? | Laacib.net
Manchester United waxay si layaableh sare ugu soo qaatay hamiga kooxdeeda ee ah in ay u soo baxdo wareega 16ka kooxood iyada oo shan daqiiqo u jirtay in ay xaalad xun gashay maadaama oo ay guuldaro kala kulmaysay Juventus ilaa daqiiqadii 85 aad.
Laakiin laba gool oo deg deg ah oo ay United keensatay intii u dhexaysay min daqiiqadii 86 aad ilaa daqiiqadii 90 aad waxay sabab u noqotay in Juventus ay garan wayday meesha laga raacay iyo sababta ay u guuldaraysatay kulan ay maamulkiisa ciyaarta oo dhan iska lahayd.
Cristiano Ronaldo ayaa u muuqday in uu kooxdiisii hore ee United guuldaro badayo laakiin Red Devils ayaa noqotay kooxdii ugu horaysay ee Juventus garoonkeeda ku garaacday 19 kulan kadib tan iyo sanadkii 2009 kii markaas oo ay Bayern Munich ahayd kooxdii ugu danbaysay ee Juve garoonkeeda kulan Champions League ah ku soo garaacday.
Dhinaca kale Manchester United ayaa markii ugu horaysay kulan Champions League ah iyada oo guuldaraysaynaysa shanta daqiiqo ee ugu danbeeyay waxay samaysay soo laabasho tan iyo sanadkii 1999 kii markaas oo ay qaabkan oo kale uga yaabsaatay Bayern Munich.
Xidigi Garoonka: Victor Lindelof ayaa noqday xidigii garoonka ugu fiicnaa kadib markii uu awooday in uu kooxdiisa Man United ciyaarta ku sii hayay isla markaana ayna goolal badan la kulmin, waxa uu awooday in uu siddeed jeer kooxdiisa ka saaray kubbado halis ahaa oo ay Juventus natiijo ku samayn kartay.
Laakiin waxaa kulankan qiimaynta guu hoosaysa ka helay Jesse Lingard iyo Paul Pogbalaakiin Smalling, Felliani, Mata, Sandro iyo Ronaldo ayaa ah xidigaha kale ee qiimayn fiican kulankan ka helay.
Halkan kaga bogo Qiimaynta Ciyaartoyda kooxaha Man United iyo Juventus.
Badalkii: Matuidi (5), Barzagli (NA), Mandzukic (NA)
Badalkii: Rashford (6), Mata (7), Fellaini (7)
08-11-2018 at 2:18 pm
Beenta zowtii real Madrid
3:0 kaga badizey goroonkooda
ronaldana dhabazha ka dhalinayey
08-11-2018 at 12:57 pm
waad saxsan tahay wll. Lkn sida saxda ah waxa weeyaan kulan heerka groupyada ah in guriga juve lagaga badiyo ayay 2009 u danbeysay.
08-11-2018 at 10:25 am
beenta nafga daa
sowtiii reall 3 iyo 0 kaga badisay garoonkeeda